Xarkaha Cusub ee LGBT Apple Watch | Waxaan ka socdaa mac
Shirkadda Cupertino ayaa u soo saartay Apple Watch qaar ka mid xarig oo ay ku ciyaarayaan midabada calanka LGBT. Ballanqaadka Apple ee kooxdan ayaa runtii muhiim ah oo xaaladdan ku jirta, marka lagu daro Xargaha leh midabadan Solo Loop iyo Nike Sport Loop, sidoo kale waxay bilaabeen taxane cusub oo ah xargaha Hermes.
Qiimuhu waa sarreeyaa nooca noocan ah Apple suumanka asalka ah laakiin Hermes waa runtii qaali waxaanan ka hadlaynaa suunka 339 euro. Xaaladdan oo kale, waxay ku saabsan tahay xargaha gaarka ah ee adeegsadayaasha yar ay awoodi doonaan inay iibsadaan.
Naqshadeynta LGBT ee loogu talagalay Solo Loop iyo Nike Sport Loop
Kuwa isticmaala ee ka fekeraya inay iibsadaan suunka asalka ah ee Apple ayaa sidaas samayn kara iyaga oo dooranaya kuwan laba moodal xus oo sharaftiisu tahay LGBT. Kalinimo tidcan iyo naylon edition Nike oo u yimid sidii cibaado kadib markii Apple Music lagu bilaabay maqalka goobta iyo Dolby Atmos.
Suumanka mar horeba la heli karo iibka waxaa la rari doonaa inta u dhexeysa 25-ka ilaa 28-ka Maajo adeegsadayaasheeda sharciga ah. Taariikhaha gudbintaani way kala duwanaan kartaa iyadoo kuxiran baahida suumanka laakiin hadda iyo inta aan qormadan qormadan ka qorayno waa kuwa taariikhda la tilmaamay. Waa macquul in Apple ay bilaabi doonto xarigyo dheeri ah ama naqshado cusub mar dambe, iyada oo sii ballaarinaysa buugyaraha ay ka kooban tahay ee moodooyinka la heli karo in yar ka badan.
Marka laga hadlayo moodooyinka Hermes, waxaa jira midabbo badan oo la heli karo, waxaad ka arki kartaa noocyada kala duwan ee ku dhex jira dukaanka Apple. halkan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Alaabada Apple » Apple Watch » Kooxda LGBT ee Apple Watch cusub
Apple Music Hi-Fi oo la jaan qaadaya Dolby Atmos waxay ku timid qiimo la'aan